Galfatoota galmee dhiyoo irratti raawwatan qofa argita. Galmeen dhiyoo yoo galmee barruu ta'e, galfata barreessaa LibreOffice fi kan kana fakkaatan muraa hundaa LibreOffice argita. LibreOffice tolchuu fi LibreOffice kaasuun gongee dhaamsaa kanaratti akka tokkotti lakkaa'amu. Wajjummaan galfatichaa yeroo hunda mul'ataa dha.
Qindaa'inoota dimshaashaa kan maddaalee deetaa LibreOffice keessaa qindeessa.
Taattoof qindaa'inoota dimshaashaa qindeessa.
Dirqaalaalee Interneetii ifteessa.